Allgedo.com » DHAGAYSO: Xasan Sh oo balanqaadyo usameeyay shacabka Kismaayo kadib kulankii Wasiiradii tagay
Print here| By: allgedo.com: Monday, December 31, 2012 // 1 Jawaab
Madaxweynaha dowlada Soomaaliy Xasan Sh Maxamuud ayaa kulan la qaatay afar wasiiro oo dhawaan booqasho ku tagtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Wasiiradaas ayaa waxaa uu ka waraystay xaalada magaalada Kismaayo iyo waxyaabihii ay kusoo arkeen markii ay magaalada tageen.
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo amniga qaranka C/Kariin Guuleed ayaa kaga warbixiyay Madaxweynaha waxa ay kala soo kulmeen safarkoodii Kismaayo.
Mudane C/Kariin ayaa sheegay in si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada dadkana ay ubaahan yihiin nadaam dowladeed oo dhamaystiran.
Riix Halkan si aad hadalka Wasiirka udhagaysato.
Intaas kadib Madaxweynaha dowlada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay warbixinta laga siiyay xaalada magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegay in axii dhibaato ah oo magaalada ka jirta ay dowlada wax ka qaban doonto.
Waxaa uu balan qaaday in ka dowlad ahaan ay garab taagan yihiin shacabka iyo siyaasiyiinta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Riix Halkan si ad udhagaysato Hadalka Madaxwenaha.
Wasiirada tagay Kismaayo ayaa kala ahaa arimaha gudaha iyoamniga qaranka, Gashaandhiga, Warfaafinta iyo Garsoorka waxaana wehlinayay taliyaha ciidamada xoogga dalka Gen Diini.
1 Jawaab " DHAGAYSO: Xasan Sh oo balanqaadyo usameeyay shacabka Kismaayo kadib kulankii Wasiiradii tagay "
Waa yaanka yaabkise 21kahor bay ahad makii use ayqabsatay muqdisho ujeedaduna ma ahan in ay dowlad noqdan waa kuwii ayagoo taango iyo tuute ways kuduulay kismayo tanina waa tiiye m.Hassan sh. Maxamud asagoo kuhubasan damuljadiid oolagubadalay use ayuu 21kadib markale kuulaay kismayo toloow koorman tahalmamidonaa